>A New Year’s letter
> သင်္ကြန်အတွင်း ရေးတော့ သင်္ကြန်စာ ဆိုပါတော့ ဇာနည်ဝင်း ဧပြီ ၁၄၊ ၂၀၀၉ မြန်မာ သင်္ကြန်စာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပြက္ခဒိန်တွေက များတော့ နှစ်သစ်ကူးပုံတွေကလည်း များတယ်၊ စုံတယ်။ မြန်မာ နဲ့ အာရှ နိုင်ငံတချို့ကတော့ ပြက္ခဒိန် ဆင်တူတယ်။ ဒီတော့ နှစ်ကူးတော့လည်း အတူတူပဲ။ ရေပက်တာတွေတောင် တူလိုက်သေးတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ နှစ်သစ်ကူးကြိုဆိုတာကို သင်္ကြန်လို့ ပြောတယ်။ သင်္ကြန် ရေပက်တာ ပုဂံခေတ်ကတည်းက ဆိုပြီး မှန်နန်း ရာဇ၀င်ကို ကိုးကား ရေးသားကြတယ်။ ဘာကြောင့် ပက်ကြသလဲ ဆိုတော့ အမျိုးမျိုး ဖြေတယ်။ နှစ်ဟောင်းက အညစ်အကြေးတွေ ဆေးပေးချင်တာပါ တဲ့။ ရာသီဥတု အပူဆုံးကာလတွေဖြစ်လို့ အေးမြ ကြည်လင်အောင် လို့လည်း...
> ယနေ့ရန်ကုန်သင်္ကြန်(ဓာတ်ပုံ – စိုးဇေယျထွန်း၊ Reuters သတင်းဌာန) ရေစိုရွှဲတဲ့ ပွဲတော်အေအက်ဖ်ပီ သတင်းဌာနဧပြီ ၁၄၊ ၂၀၀၉ ရန်ကုန်သူ ရန်ကုန်သားများ ရေကစားနေကြသည်။ ဆံပင် ဆေးရောင်စုံ ဆိုးထားသူများလည်း ပါဝင်သည်။ ဤရေသဘင်ပွဲတော်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆင်နွဲရန် အစိုးရက ခွင့်ပြုထားသည့် တခုတည်းသော ပွဲတော်ဖြစ်သည်။ ဤပွဲတော်ကို ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို နိုင်ငံတို့တွင်လည်း ကျင်းပနေသည်။ လက်ရှိ စီးပွားရေး ချွတ်ခြုံကျမှုများကို မေ့ပစ်ရန် သင်္ကြန်ပွဲအတွင်း နှစ်မြှုပ်ထားလိုက်ခြင်းက အကောင်းဆုံး ဖြစ်မည်ဟု အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသူတဦးက ဆိုသည်။ “လောလောဆယ် ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို ဘေးဖယ်ထားလိုက်ပါ။ သင်္ကြန်ဆိုတာ ပျော်ပျော်နေရမယ့် အချိန်ရှင့်” ဟု သူကဆိုသည်။ ရန်ကုန်သူ ရန်ကုန်သားတို့...
> မြန်မာ့ဂီတနှင့် မြန်မာ့ဂီတအရသာရန်ဝင်း (တောင်တံခါး)ဧပြီ ၁၂၊ ၂၀၀၉ ၁၉၅၅ ခုနှစ် ဘန်ကောက်မြို့ရောက် မြန်မာ့တူရိယာအဖွဲ့တဖွဲ့ (ဓာတ်ပုံ- Bettmann/CORBIS) “- – – ဂီတကို ဖန်တီးသည့် တူရိယာချင်းလည်း မတူ၊ အခြေခံကြိုက်နှစ်သက်ပုံချင်းလည်း ကွဲပြားသဖြင့် မြန်မာ့ဂီတကို အနောက်တိုင်းဂီတနှင့် နှိင်းယှဉ် ပြောကြားရာ၌ မည်သည့်ဂီတက ပို၍ ကောင်းမွန်ကြောင်း မဆုံးဖြတ်နိုင်ပေ – – -“ No tags for this post. Related posts No related posts.
>Thai protest ends and Govt extends Songkran holiday
> ပစ်ခတ်မှုများ မပြုလုပ်ရန် ငိုကြွေး တောင်းပန်နေသော ဆန္ဒပြသူတဦး (photo: Reuters) ဘန်ကောက်ဆန္ဒပြပွဲကြီး အဆုံးသတ်၊ ယိုးဒယား သင်္ကြန်ပွဲကို ၂ ရက် တိုးချဲ့မည်ဟုဆို မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၆ ဧပြီ ၁၄၊ ၂၀၀၉ သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ၂ ရက် တိုးချဲ့လိုက်ကြောင်း ထိုင်းအစိုးရက ယနေ့ ကြေညာလိုက်သဖြင့် ကြာသာပတေး နှင့် သောကြာနေ့အထိ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရေသဘင်ပွဲ ဆက်လက် ကျင်းပမည် ဖြစ်ကြောင်း ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းဌာန အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် ရေးထားသည်။ ထို ၂ ရက်အတွင်း ဘဏ်များ၊ ကုမ္ပဏီများ အနေဖြင့် လုပ်ငန်းများ ပိတ်ရေး မပိတ်ရေးကို ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြောင်း အစိုးရ ပြောခွင့်ရအရာရှိ Panithan...
>Tin Ko Moe Nyo – Padauk Poem
> တစ္ဆေခြောက်တဲ့ ပိတောက်အိပ်မက် တင်ကိုမင်းညို ဧပြီ ၁၄၊ ၂၀၀၉ သွေးရိုးသားရိုး ပြောကြကြေးဆို အိမ်ရှေ့က စားပွဲပေါ်မှာ ပိတောက်တွေ မပွင့်တာကြာခဲ့ပြီ။ ဘယ်လောက်ထိ ဇာတ်က နာသလဲလို့ဆိုရင် ဘုရားညောင်ရေအိုးကလည်း ပိတောက်ပန်းကို လွမ်းလို့။ ကလေးတယောက်နဲ့ မုဆိုးမဖြစ်နေရသူကလည်း ပိတောက်ဆိုရင် စိတ်နာသတဲ့။ ဘယ်တုန်းကမှ မျိုးရိုးမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ ဟစ်ဟော့ပ် ဂီတနဲ့ တောင်းစားနေရသူတွေကလည်း ဒီနှစ် အတာသင်္ကြန်မှာ ပိတောက်တွေပန်ပြီး တောင်းမတဲ့ သင်္ကြန်မိုးသီချင်းတွေ တိုက်လို့ တဲ့။ ဘုရား … ဘုရား ဘာတွေ ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်သလဲဆိုတာ ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်လည်း နားမလည်နိုင်တော့ဘူး တဲ့ … သူကိုယ်တိုင်က ဘုရား … ဘုရား တနေရသတဲ့။ လူတယောက် မိုးပေါ်က ဆင်းလာတယ် လက်တဖက်မှာ...
>Htain Linn - Green Padauk Poem
>Gaddafi family members flee to Algeria
Ko Lay (Innwa Goneyi) - Poem